न्यूज सञ्जाल: » इलाम अस्पतालमा अब ‘भेन्टिलेटर’ सेवा !
इलाम अस्पतालमा अब ‘भेन्टिलेटर’ सेवा !
न्यूज सञ्जाल १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १९:५१
इलाम । जनशक्ति अभावको पीडा खेपिरहेको इलाम अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर आवश्यक परेमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारी फैलिरहेका बेला अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा रहेको विरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने तयारी रहेको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले बताए ।
‘तत्काल भेन्टिलेटर चाहिएको विरामीलाई केही समय राख्न सक्ने अवस्था छ । थप उपचारका लागि भने आवश्यक पर्ने ल्याब र विशेषज्ञको सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा अन्यत्रै पठाउनु पर्ने बाध्यता छ’, खतिवडाले भने ।
अस्पतालले खरिद गरेको दुई शैयाको आइसीयु, एउटा भेन्टिलेटर, इन्फुजन पम्प, सिरिन्ज पम्पलगायतका सामग्री जडान भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ । गत असोजमा कोभिड–१९ का संक्रमित विरामीलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा ल्याइएको स्वासप्रस्वास सजिलो बनाउने किसिमका दुईवटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ ।
यो सँगै इलाममा पछिल्लो पटक जडान गरिएको भेन्टिलेटरले भने सिकिस्त अवस्थामा पुगेको विरामीको मुटुलाई जीवित राख्ने काम गर्छ । बच्चा र ठूला दुवै मानिसका लागि पछिल्लो पटक जडान भएको भेन्टिलेटर उपयोगी रहेको जनाइएको छ ।
अस्पतालमा यी दुई किसिमका भेन्टिलेटर जडान गरिए पनि विषेशज्ञ जनशक्ति नहुँदा विरामीको निरन्तर उपचारमा भने समस्या देखिएको छ । ‘दरबन्दीमा विशेषज्ञ डाक्टर एक जना मात्रै स्थायी हुनुहुन्छ, बाँकी सबै करार र छात्रवृत्तिमा आएका डाक्टरहरु छन् । दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ ल्याउन प्रदेश देखि केन्द्रसम्म पहल गरेपनि सम्भव भइरहेको छैन’, व्यवस्थापक खतिवडाले भने ।
भेन्टिलेटर सञ्चालनकै लागि काडियोलोजिस्ट डाक्टर आवश्यक पर्ने अस्पतालका व्यवस्थापक खतिवडाले बताउँछन् । अस्पतालले तत्कालका लागि आवश्यक परे अस्पतालमै रहेको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
‘अन्य विषेशज्ञ पनि उत्तिकै आवश्यक छ, छात्रवृत्तिकै डाक्टरहरु भएपनि तत्काल भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, खतिवडाले भने, ‘विशेषज्ञ व्यवस्थापन सँगै ब्लडको कल्चरल टेस्टका लागि ल्याब सेवा पनि विस्तार गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ ।’
कोभिड संक्रमण बढि रहेको अवस्थामा अस्पतालले २० शैयाको लेभल १ को कोभिड अस्पताल तयारी अवस्थामा राखेको छ । तर, अहिले कोभिडको लक्षण देखिएका बिरामी भए पनि कोभिडकै विरामीलाई राख्नु पर्ने अवस्था नभएकाले यो अस्पताल भने खाली छ । कोभिडका विरामीका लागि अस्पतालले २० वटा अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्था गरिसकेको छ ।
यता भेन्टिलेटरलाई चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल विकास समितिले पहल गरिरहेको समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद बरालले बताए ।